सर्वदलीय बैठकमा के–के भयो ?, कसले के भने ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सर्वदलीय बैठकमा के–के भयो ?, कसले के भने ?
२३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टकीरण सोध्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुुझाव दिएका छन् ।
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको करिब ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमिलाई गत आइतवार जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि आक्रोश बढेका बेला दलहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सिमा विवाद अब सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान नहुने भएकोले प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गरेर स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि तथ्यांकअनुसार पनि कालोपानी र लिपुलेक नेपालको भूमी भएकोले यसबारेमा सरकारले भारतसँग कुटनीतिक रुपमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै उनले नेपालले विज्ञप्ति मात्रै होइन, भारतीय पक्षलाई आफ्ना असन्तुष्टि प्रष्टरुपमा सुनाउँदै भारतीय सेनालाई लिपुलेक र कालापानीबाट फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, सीमाविद, राजनीतिक दलका नेताहरु लगायत थिए ।
Previousसीमा सुरक्षा गर्न नसक्दा भूमि अतिक्रमण भयोः नेता खनाल
Nextप्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिँदै